काठमाडौं। भारतीय टेलिभिजन जि टिभीको विवादित भिडियो रिपोर्टबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख खोलेको छन् । उनले जि टिभिको भिडियो रिपोर्टमाथि गरिएको आलोचना व्यर्थ भएको बताए। उनले जि टिभिले एभरेष्टको नाउँबारे उठाएको प्रश्न जायज नै भएको पनि बताए।
आफुँ पक्षीय प्रेस संगठनको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘मैंले अस्ति एक विदेशी टेलिभिजनलाई अन्तरवार्ता दिएँ, आलोचना गर्ने ठाउँ कहिँ भेटिएनछ, अनि त्यो पत्रकारले इण्डियामा गएर यो एभरेष्टका नाउँमा किन राखेको रु हाम्रो मान्छेले पहिलो पटक नापेको थियो भनेछ, हामीले त कमसेकम भने हुन्थ्यो। के बोलेछ, यहाँ राष्टवादको बर्बण्डर मच्चियो।’
उनले भिडियो रिपोर्टमा जि टिभीले सगरमाथा खान्छु नभनेको बताए। उनका अनुसार नेपालीहरु बेकारमा बहकिए। भिडियो रिपोर्टबारे बोल्दै उनले भने, ‘के उसले सगरमाथा खान्छु भनेको छ र रु यति साह्रो बहकिनु पर्ने पनि आवश्यकता छैन्। वाइघातमा बहकिएर।’
राष्ट्रवाद भनेको तामासा र नाटक नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ। ‘राष्ट्रवाद भनेको तमासा गर्ने कुरा हो रु राष्ट्रवाद ड्रामा हो ? राष्ट्रको पक्षमा, स्वभिमानको पक्षमा साँचो अर्थमा उभिने कुरा राष्ट्रवाद हो’, उनले भनेका छन्।
Tagsप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
स्यानिटाइजर सेवन गर्दा दुई जनाको मृत्यु
महिलालाई जिउँदै पुरेर एक्स्काभेटर चालक बुढाथोकी फरार
सांसदहरु तानातानमा : मन्त्री र पैसाको प्रलोभन
प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक चालबाजी कि साँच्चिकै सुरक्षा थ्रेट ?
आज देशभरको मौसम कस्तो रहला ?
नवलपरासीमा दुई ट्रक जुध्दा दुवै चालकको मृत्यु : सहचालक गम्भीर घाइते
बारा-चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्य वैशाखदेखि
राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर खाली, कसकाे छ सम्भावना ?